Imishini eyenziwe ngokwezifiso yokusebenza ngokhuni, ifenisha eyenza abahlinzeki bemishini | Imishini yaseShanggui
Imishini yokusebenza ngokhuni yeShanggrui
Ngokwezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ukuklama nokukhiqiza imishini engeyona eyejwayelekile.
Imishini yaseShangrui egxile ekukhiqizeni imishini yokukhiqiza ye-board ehlukahlukene kanye nemishini yokukhiqiza ifenisha eqinile (imishini yokwenza imishini, ngokwemishini yefenisha), ngokuya ngezidingo ezihlukile zamakhasimende ukuklama nokukhiqiza imishini engeyona eyejwayelekile (njengomshini wabezindaba).
Imishini yaseShanggui iyimishini yesimanje yokusebenza ngokhuni&Ifenisha eyenza amabhizinisi we-EXTRISE ehlanganisa ukwakheka, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukufakwa, ukuthengiswa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva.
Ngama-elite eqoqweni eliphakeme, imishini yokukhiqiza enhle nemishini yokuhlola. Ukuhlolwa komkhiqizo, izinqubo zokulawula ezisezingeni zithuthukiswa ngokuqinile.
Umqondo wokwenza izinto ezintsha kanye ne-pragmatism unxusa imishini yemishini yaseShangrui ukuze iqhubeke nokufunwa kwemakethe, ubuchwepheshe bokuthuthukisa ibanga eliphakeme, insizakalo ephelele ngemuva kokuthengisa, futhi idale ikhwalithi yamasheya omshini weShanggrui.
I-SHANGRUI MACHINCHINAREST CO, Ltd. Itholakala eShunde, eGuangdong Province
Imishini yaseShanggui iyimishini yesimanje yokusebenza ngokhuni&Imishini yokwenza ifenisha (efana ne-Press Machine) Enterprise ehlanganisa ukwakhiwa, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukufakwa, ukuthengiswa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva. Ngama-elite eqoqweni eliphakeme, imishini yokukhiqiza enhle nemishini yokuhlola. Ukuhlolwa komkhiqizo, izinqubo zokulawula ezisezingeni zithuthukiswa ngokuqinile.
Imishini yaseShangrui egxile ekukhiqizweni kwezinhlobonhlobo zebhodi kanye nemishini yokukhiqiza ifenisha eqinile (efana nomshini wokushicilela), ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ukuklama nokukhiqiza imishini engeyona eyejwayelekile.